OTU ESI EJIKỌ KỌMPUTA NA WI-FI - N'IHI BEGINNERS - 2019
Otu esi ejikọ kọmputa na Wi-Fi
N'isiokwu a, m ga-ekwu maka otu ị nwere ike jikọọ kọmputa gị na Internet site na Wi-Fi. Ọ ga-abụ maka PC ndị na-anọchi anya, nke, maka ọtụtụ akụkụ, enweghị ndabara a site na ndabara. Otú ọ dị, njikọ ha na netwọk ikuku na-adị ọbụna na onye ọrụ novice.
Taa, mgbe ọ bụla ụlọ ọ bụla nwere router Wi-Fi, iji eriri iji jikọọ PC na Ịntanetị nwere ike ghara ịdị irè: ọ bụ ihe na-adịghị mfe, ọnọdụ nke onye na-ahụ maka redio na sistemụ ma ọ bụ desktọọpụ (dị ka ọ bụ mgbe ahụ) adịghị mma, na ịnweta Ịntanetị ngwa ngwa ọ bụghị nke ahụ na ha apụghị ịnagide njikọ ikuku.
Ihe achọrọ ijikọ kọmputa gị na Wi-Fi
Ihe niile ịchọrọ ijikọ kọmpụta gị na netwọk ikuku bụ ịkwado ya na nkwụnye Wi-Fi. Ozugbo nke a gasịrị, ya, dị ka ekwentị gị, mbadamba ma ọ bụ laptọọpụ, ga-enwe ike ịrụ ọrụ na netwọk na-enweghị wires. N'otu oge ahụ, ọnụahịa nke ngwaọrụ dị otú a anaghị adị elu ma dị mfe karịa ọnụ ọgụgụ dị mfe nke 300 rubles, ndị dị mma dị ihe dịka 1000, ndị dị oke elu dịkwa puku anọ. Na-ere n'ụzọ nkịtị na ụlọ ahịa ọ bụla.
Ihe ntanetị Wi-Fi maka kọmputa ahụ bụ ụdị isi abụọ:
Ihe ntanetị Wi-Fi USB, na-anọchite anya ngwaọrụ dị ka ụgbọala USB.
Kọmputa kọmputa dị iche, nke arụnyere na PCI ma ọ bụ PCI-E, otu eriri ma ọ bụ karịa nwere ike jikọọ na osisi ahụ.
N'agbanyeghị na nhọrọ mbụ dị ọnụ ala ma dị mfe iji mee ihe, M ga-akwado nke abụọ - karịsịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta mgbasapụ nwere obi ike yana ọsọ ọsọ njikọ Ịntanetị. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na eriri USB dị njọ: ijikọ kọmputa na Wi-Fi na ụlọ nkịtị, n'ọtụtụ ọnọdụ ọ ga-ezuru.
Ndị ntanetị kachasị mfe na-akwado 802.11 b / g / n 2.4 GHz modes (ọ bụrụ na ị na-eji netwọk 5 GHz, buru nke a n'uche mgbe ị na-ahọrọ onye nkwụnye), enwekwara ụfọdụ nke na-enye 802.11 ac, mana ole na ole nwere ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ọnọdụ a, ma ọ bụrụ na e nwere - ndị a na enweghị ntụziaka m mara ihe bụ.
Jikọọ nkwụnye Wi-Fi na PC
Ijikọta nkwụnye Wi-Fi na kọmpụta anaghị esiri ike: ọ bụrụ na ọ bụ eriri USB, wụnye ya na ọdụ ụgbọ mmiri kwekọrọ na kọmputa ahụ, ọ bụrụ na ọ bụ n'ime, wee mepee usoro nke kọmputa ahụ agbanyụrụ ma tinye ya na ntinye kwesịrị ekwesị, ị gaghị emehie.
Gụnyere na ngwaọrụ ahụ bụ ọkwọ ụgbọ ala na, ọbụlagodi na Windows na-akpaghị aka mata ma nyeere ohere ịnweta netwọk ikuku, ana m akwado ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala nyere, ka ha nwere ike igbochi nsogbu ndị nwere ike. Biko mara: ma ọ bụrụ na ị ka na-eji Windows XP, mgbe ịchọta ihe nkwụnye, jide n'aka na a na-akwado usoro sistemụ a.
Mgbe ntinye nke nkwụnye ahụ zuru ezu, ịnwere ike ịhụ netwọk ikuku na Windows site na ịpị akara ngosi Wi-Fi na taskbar ma jikọọ ha site na itinye paswọọdụ.